असार २६ गते शनिबार कस्तो रहला तपाइको दिन - Sawal Nepal
काठमाडौं सवाल नेपाल २०७८ असार २५, २१:१४
भोलि असार २६ गते शनिबार कस्तो रहला तपाइको दिन ? हेर्नुस् राशिफल!
असार २५, २०७८ST
पारिवारिक मनमुटाव हुन् सक्छ । तेसैले मानशिक चिन्ता बढ्न सक्छ । मनमा दुबिधा बढ्ने हुदा महत्वोपूर्ण निर्णय नलिनु होला। वाद-विवादमा फस्ने योग हुदा झैझगडा बाट टाढा रहनु होला । स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्ने हुदा बिशेस सावधानी अपनाउनु होला । मुद्धा मामिलामा बिचार गरेर मात्र निर्णय लिनु होला । मानहानि र धनहानि हुने सम्भावना भएको हुदा बिशेस सावधानी अपनाउनु होला ।